Fanafihana tany Ambatomirahavavy : nampisavoritaka ny fokonolona ny fisamboran’ny zandary | NewsMada
Fanafihana tany Ambatomirahavavy : nampisavoritaka ny fokonolona ny fisamboran’ny zandary
Niteraka savorovoro tamin’ny fokonolona tany Imerintsiafindra Ambatomirahavavy ny fisamboran’ny zandary olona voalaza fa ahiahina amin’ny fanafihana nitranga tany an-toerana, ny 12 jona lasa teo.
Araka ny fanazavan’ny solontenam-pokonolona mantsy, olona nanampy tamin’ny fanenjehana ireo jiolahy indray no lasa nahiahin’ny tompon-trano ho mpanafika ka notondroiny ary nosamborina. Nitaky ny hamoahana io tovolahy nosamborina io ny fokonolona avy any Imerintsiafindra ary nirohotra teny amin’ny tobin’ny zandray nanao fitakiana. « Solontena ihany izahay no tao fa tsy ny fokonolona rehetra akory. Nahafaly satria nahomby ny fitakiana”, hoy ny solontenan’ny fokonolona tamin’ny mpanao gazety.
Voalaza indray anefa fa nisy olona efatra izay fantatra fa mpanolotsaina, nosamborin’ny zandary manodidina ity raharaha ity. Vao mainka nampisavorovoro ny olona ny fahalalana ity vaovao farany ity.
Raha ny fitantaran’ny fokonolona, ny 12 jona tamin’ny 10 ora sy 45 minitra alina, ny nisehoan’ny fanafihana. Tranona zandary efa misotro ronono io nisy nanafika io. Raikitra any antso vonjy ka nivoaka ny vatan-dehilahy tao an-tanàna. Tratra tamin’izany ny telo lahy ka nisy ny fifandonana. Nitifitra ny iray tamin’ireo izay nanana basy ka voa tamin’izany ny lehilahy iray. Naratra mafy kosa ny iray tamin’ireo jiolahy na tafaporitsaka aza ny roa.
“Ny ampitso anefa, tovolahy tanatin’ireo nisambotra indray no nosamborin’ny zandary. Tsy nahafaly ny fokonolona aty an-toerana io”, hoy ny fanazavana. Fantatra fa io tovolahy io, izay mpifanolo-bodirindrina amin’ny voatafika no notondroin’ilay zandary efa misotro ronono. “Niaraka tamin’ny vatan-dehilahy nisambotra izy, ary izy io aza no nahasambotra ilay iray, kanefa izy indray no nosamborina avy eo”, hoy ny fanamafisana.
Nilaza ny zandary fa fanaovana fanadihadiana ny nataon’izy ireo ary nisy ny fitoriana nipetraka mba nahafahana nitondra ireo olona nanaovana famotorana. Mifamahofaho eo ny raharaha, ka miandry izay tohiny ny fokonolona any Ambatomirahavavy.